ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: မိကီမိုတို ပုလဲကျွန်းသို့တစ်ခေါက်
Posted by ကြည်ကြည် at 9:34 AM
OMG, those pearl jewelry are so beautiful, and I wish I could have at least one elegant pearl earrings. Thank you for sharing the island trip and can't wait to read coming soon posts!!!
ညိမ်းနိုင် August 26, 2011 at 11:58 AM
ရတနာစိန်ကျောက်တွေက ကျွန်တော်နဲ့လားလားမှမသက်ဆိုင်ပေမယ့် ဂျပန်
သူတို့ဆီမှာမိန်းမတွေက ပုလဲငုပ်ကြသကိုး....ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ အမျိုး
ဂျပန်မှာလေ များသောအားဖြင်. အဖွားကြီးအရွယ်တွေက လက်ဝတ်ရတနာဝတ်ကြတာဝါသနာပါသလို၊တော်တော်လဲဝတ်ကြတယ်နော်။ဒါပေမယ်.သူတို.၀တ်ထားတာတွေက ၊မြန်မာမျက်စေ.နဲ.ကြည်.ရင်တော. ဖန်စီပစည်းတွေလိုဘဲ။
မြန်မာပြည်မှာတော. တတ်နိုင်တဲ.အမျိုးသမီးကြီး၊အဖွားကြီးတွေဆို စိန်တွေ၊ ရွှေတွေကိုညွှတ်နေအောင်ဝတ်နိုင်ကြတယ်နော်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 26, 2011 at 7:34 PM
ပြီးတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပုလဲလေးတွေကိုလည်း သဘောကျတယ်။
ရတနာတွေထဲမှာတော့ တွင်းထွက်မဟုတ်ဘဲ ထူးထူးခြားခြား သတ္တဝါကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ရတနာပါဘဲ။
kokoseinygn August 26, 2011 at 7:39 PM
ကမာကောင်လေး တွေ၇ဲ့ မျက်ရည်လို့ ပုလဲကိုတင်စားထား
အင်္ဂါဟူး August 26, 2011 at 8:40 PM
မကြည်ကြည်လဲ ဂျပန်မှာ ပုလဲ အကြီးကြီးတွေ ၀တ်တယ်နော်.. :P
ပုလဲကိုလဲ စိန်လို ကြာလေ ကောင်းလေ မှတ်တာ အခုမှ သိတယ်.။
ဒါပေမယ့် အစ်မရယ်...ကမာကောင်တွေနဲ့ လုပ်ရတာဆိုတော့ သနားမိသား။
ချစ်ကြည်အေး August 27, 2011 at 12:49 AM
အောက်ဆုံးက ပုလဲနားကပ်လေး ကြိုက်တယ်။ ပုလဲအကြောင်းပြောရင် မပုပုလဲနားကပ်ကိုပဲ စိတ်ကသတိရပြီး ရယ်ချင်တာ။ ဒေါ်လေးကြည်တို့ လမ်းများနေတယ်ပေါ့လေ ဟုတ်လားးးး)
Kay August 27, 2011 at 7:59 AM
ပုလဲနက် ပဲ ကြိုက်တယ်..
seesein August 28, 2011 at 4:52 AM
Visited pearl island with you.Thanks for sharing.
မဒမ်ကိုး August 28, 2011 at 9:59 PM
သွားသာသွား သွားပြီးရင်တင်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ချစ်မ ..
အပြုံးပန်း September 4, 2011 at 7:22 AM
တူးတူးရဲ့ မျက်သွယ်သီချင်းကို ဆိုညည်းမိတယ်၊ စိတ်ထဲက။
”ကမာမျက်ရည်ပုလဲများ လည်မှာ မဆွဲစမ်းပါနဲ့ခင်”
eilay December 17, 2011 at 7:11 AM
hello, i like so much u r pendant design , i want to made same like u , tks so much for design.i am one of u r regular reader. hope to met u one days,
Yan September 10, 2013 at 11:27 AM
ဒီပို့စ်လေးကို Myanmar Blogs Digest Page လေးမှာ ဝေမျှပေးချင်လို့ ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ဗဟုသုတဖြစ်စေတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးတွေကို ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်...